Isboortiga Arena Sport Perimeter LED Display - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
Qiyaasta heerka cusbooneysiinta sare si loo hubiyo muuqaalka bilaashka ah iyo fiidiyowyada kamaradda telefishanka iyo baahinta tooska ah inta lagu guda jiro cayaaraha isboortiga, tanina waa mid aad muhiim ugu ah shaashadda garoonka ee wareegga garoonka.
Maaskaro jilicsan oo jilicsan iyo barkin jilicsan dusha sare ee kabadh kasta, qaab dhismeedka dhabarka dambe ee la hagaajin karo.
Barkin jilicsan waa la dhaqaajin karaa waana la qaadi karaa ka dib marka la isticmaalo muuqaalka garoonka ee garoonka, sidoo kale qaansooyinka waxaa dib loogu laaban karaa albaabka dambe ee gidaarka LED.
Dheeraad ah oo dheeri ah, shaashadda waxaa loo isticmaali karaa shaashadda LED kirada ah;
Laalaadinta qaab-dhismeedka loogu talagalay isticmaalka shaashadda kirada ee loo yaqaan 'LED kirada' iyada oo loo marayo baarka sudhan iyo gantry;
Sanduuqyo dhaqso leh oo ku yaal golaha wasiirrada kor iyo hoosba, bidix iyo midig si deg deg ah loogu rakibo loona kala furfuro.
Xirmada kiiska duulimaadka waxay ka dhigeysaa mid ku habboon oo ammaan ah in laga wareejiyo shaashaddaan banaanka ah ee loo yaqaan 'LED-yada' laga soo qaado hal goob oo loo wareejiyo.
Mid kasta oo ka mid ah baahiyahaaga bandhigga garoonka LED-gaaga, fadlan si xor ah ula xiriir annaga oo ah wakiilka iibka ee Yonwaytech waxaanan ku siin doonnaa xal ku habboon oo buuxiya kana sarreeya shuruudahaaga.